Genesis 33 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yakob kohyiaa Esau (1-16)
Yakob kɔɔ Sekem (17-20)
33 Afei Yakob maa n’ani so, na ohui sɛ Esau ne mmarima 400 reba.+ Enti ɔkyɛɛ mmofra no mu maa Lea ne Rahel ne mmaawa baanu no.+ 2 Ɔde mmaawa no ne wɔn mma dii anim,+ Lea ne ne mma dii so,+ ɛnna Rahel+ ne Yosef dii wɔn akyi. 3 Afei n’ankasa kodii kan, na ɔrebɛn ne nua no nyinaa na ɔrebɔ ne mu ase; ɔyɛɛ saa mpɛn ason. 4 Ɛnna Esau de mmirika behyiaa no, na ɔyɛɛ no atuu few n’ano, na wɔn baanu sui. 5 Bere a ɔmaa n’ani so huu mmea ne mmofra no, obisae sɛ: “Eyinom nso fi he?” Ɛnna obuae sɛ: “Ɛyɛ mmofra a Onyankopɔn de adom w’akoa.”+ 6 Ɛnna mmaawa no ne wɔn mma dii so bae, na wɔbɔɔ wɔn mu ase. 7 Lea ne ne mma nso bae bɛbɔɔ wɔn mu ase, na Yosef ne Rahel dii so bae, na wɔbɔɔ wɔn mu ase.+ 8 Esau bisae sɛ: “Adɛn nti na wudii kan maa nnipa pii behyiaa me?”+ Ɛnna ɔkae sɛ: “Meyɛɛ saa na manya me wura anim dom.”+ 9 Afei Esau kae sɛ: “Me nua, nea mewɔ dɔɔso.+ Ma wo nneɛma no nwɔ hɔ.” 10 Nanso Yakob kae sɛ: “Daabi. Mesrɛ wo, sɛ manya w’anim dom a, ɛnde gye m’akyɛde yi, na mepɛ sɛ mihu w’anim nti na mede bae. Na w’anim a mahu yi te sɛ nea mahu Onyankopɔn anim, efisɛ woatew w’anim ama me.+ 11 Mesrɛ wo, gye m’akyɛde yi; ɛyɛ nhyira a mede rebrɛ wo,+ efisɛ Onyankopɔn adom me ama manya biribiara a mihia.”+ Enti ɔsrɛɛ no ara ma ogyei. 12 Akyiri yi, Esau kae sɛ: “Ma yɛnkɔ, na medi w’anim.” 13 Ɛnna ɔno nso ka kyerɛɛ no sɛ: “Me wura nim sɛ mmofra no ho nyɛ den+ na me nguan ne anantwi a wɔka me ho no nso, ebi ma wɔn mma nufu. Enti sɛ yɛka wɔn ntɛmntɛm da koro a, wɔn nyinaa bewuwu. 14 Me wura mesrɛ wo, di w’akoa anim kan na mentɔ me bo ase nnantew sɛnea me nyɛmmoa yi ne me mma no betumi kosi sɛ medu me wura nkyɛn wɔ Seir.”+ 15 Ɛnna Esau kae sɛ: “Mesrɛ wo, ma minnyaw me nkurɔfo yi bi mma wo.” Na ɔno nso kae sɛ: “O adɛn na worehaw wo ho? Nea mihia ara ne sɛ menya me wura anim dom.” 16 Enti saa da no Esau san kɔɔ Seir. 17 Na Yakob siim kɔɔ Sukot,+ na osii ne fi wɔ hɔ, na ɔbobɔɔ buw maa ne mmoa no. Enti ɔfrɛɛ hɔ Sukot.* 18 Yakob fii Padan-Aram+ beduu Sekem+ wɔ Kaananfo+ asaase so dwoodwoo; na osii ne ntamadan wɔ kurow no nkyɛn. 19 Na ɔtɔɔ asaase a osii ne ntamadan wɔ so no fii Sekem papa Hamor mma no nkyɛn; ɔmaa wɔn nnwetɛbona 100.+ 20 Osii afɔremuka wɔ hɔ, na ɔtoo din Onyankopɔn yɛ Israel Nyankopɔn.+
^ Ɛkyerɛ, “Apata; Asese.”